Uvimba weSilivere - Iphepha 2 lesi-4
I-XAGUSD i-Surges kwiNgxelo ye-US Jobs Report phakathi koxinzelelo lweDola
Ukuhlaziywa: 5 Septemba 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso eXAGUSD-Septemba 5
Isilivere (i-XAG) inyuke nge-3.90 yeepesenti kwiseshoni yokugqibela, incediswa yingxelo ye-NFP egwenxa, engena ngezantsi kuqikelelo. I-XAGUSD ifikelele kwi- $ 24.87, kwelona nqanaba liphezulu ngenyanga, ngokoluhlalutyo lobuchwephesha. Inkqubo ye- dollar ihlala ixinezelekile iyonke, yandisa ilahleko ngeveki.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 26.00, $ 25.50, $ 25.00
Amanqanaba enkxaso: $ 23.50, $ 22.87, $ 21.89
Ixesha elide kunye neliphakathi kwikamva linethemba, kwaye ukunyuka ukuya kwi-25.00 yeedola kulindeleke ukuba inqanaba lesithintelo le- $ 24.50 lihlale njengenkxaso. Kwelinye icala, ikhefu kunye nokuvalwa ngezantsi kwe- $ 24.50 kuya kubuyisa inqanaba le- $ 24.00 kwakhona. Esi sibini sihamba kwaye sinokuhamba ngenye indlela kule veki.
Ngokuchasene noko, siza kulindela okungaphantsi kweedola ezingama-24.50, ngeenjongo ze- $ 24.00 kunye ne- $ 23.50 kumandla edola. Ukusuka kumbono wobuchwephesha, ukuphuma emazantsi kunokwenzeka kwiintsuku ezimbalwa ezizayo zokurhweba. Kule meko, ireyithi yotshintshiselwano yeXAGUSD inokufumana inkxaso kwiipesenti ezingama-23.50 nakwi- $ 23.00.
Ukuqhekeka kwakutshanje kweedola ezingama-24.50 kulindeleke ukuba kudlule kwiiseshoni ezizayo zorhwebo ngokwembono yobugcisa. Kule meko, inqanaba lenkxaso ethe tye ye- $ 24.00 inokubonelela ngenkxaso kwi-XAGUSD yokutshintsha kwemali kwimeko yokubuyela umva. I-RSI ihlala ihlawulwe kakhulu kwixesha elifutshane.
Esi sibini kulindeleke ukuba sifumane inkxaso yokuqala kwi- $ 24.50, nangona kunjalo, ukophula okungaphezulu kunokuhamba ngesilayidi ngokuyisa kwinqanaba elilandelayo lenkxaso ye- $ 24.00. Kwizinto ezilungileyo, isibini kulindeleke ukuba sibethe inqanaba laso lokuqala lokumelana ne- $ 25.00, ngespike ngokuyiyisa kwi- $ 25.50.
tags Isilivere (XAGUSD), Uhlalutyo Technical
I-XAGUSD inyusa ukubuyela kummangaliso kwindawo ekufutshane ne- $ 24.00
Ukuhlaziywa: 29 Agasti 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso eXAGUSD-Agasti 23
Emva kokungena kwi-22.87 yeedola ekuqaleni kweveki engaphambili, i-XAGUSD ikhuphe ukubuyela umva okumangalisayo ukuze ivale kwi- $ 24.02. Kwimeko yokubeka esichengeni, idola yaseMelika iye yathamba, yatyhala isilivere yaya kwingingqi eyandisiweyo. Idityaniswe nokukhutshwa kwedatha ebalulekileyo ye-macroeconomic evela e-US, yamva nje Umtshangatshangiso we-COVID Kuqikelelwa ukuba kunokubangela ukuthoba isantya.
Amanqanaba eResistancw: $ 25.50, $ 25.00, $ 24.50
Amanqanaba enkxaso: $ 22.87, $ 21.89, $ 20.65
I-XAGUSD inyukile ngaphaya kwenqanaba le-24.00 yengqondo kwaye kwiseshoni ezayo inokuqhubeka nokufumana amandla aphezulu. Isilivere inamathuba afanelekileyo okubuyela kwingingqi ye-bullish phakathi kwe- $ 25.00 kunye ne- $ 27.00.
Kwicala lokuxhasa, inqanaba lenkxaso ethe tyaba kwinqanaba le- $ 23.50 yenqanaba lokudibana kwinqanaba lokuxhasa kwangoko lesilivere. Kwiinkunzi zeenkomo zesilivere, ukuhamba ngezantsi kwendawo yokudibanisa kuya kuba ngumzabalazo kuba kuya kubonisa ukuba isilivere ilahlekelwa ngamandla. Kule meko, isilivere izakuwela kwi-22.87 yeedola, kwinqanaba lokuxhaswa kuvavanyo.
I-oscillators yexesha elifutshane kwitshathi yeeyure ezi-4 ikwabonisa ukonyuka okuqinisekileyo njengoko i-RSI ihlala kwindawo ye-bullish, mhlawumbi inyusa ukujonga okuhle kwexabiso ngaphandle kokurhweba ezantsi kwetshathi.
Kwicala elisezantsi, inqanaba leedola i-23.50, indawo ekufutshane yenkxaso, inokubonelela ngenkxaso, kodwa ulwaphulo kweli nqanaba alunakufane luthathe isaziso ngaphandle kokuba ixabiso liwela ngaphantsi kwenkxaso eyomeleleyo yendawo yovavanyo esezantsi, ekungoku ikwi- $ 22.87.
I-XAGUSD ithwala uloyiso, iirekhodi zemihla ngemihla ziphantsi kwe $ 23.00
Ukuhlaziywa: 22 Agasti 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso eXAGUSD-Agasti 22
Kwiveki ephelileyo, isibini seXAGUSD sajika saya kwicala elisezantsi, sabetha yonke imihla isezantsi ye- $ 22.87. Idola yayiyeyona mali yomeleleyo ebhodini, kodwa ukuphela kweveki, yayilahlekile. Nangona kunjalo, isilivere iphantsi kwiseshoni yesine ngokulandelelana, ukurhweba ngokujikeleze uphawu lwe- $ 23.03, ngaphandle kwayo Idola yaseMelika ubuthathaka ngexesha lokuphela kweveki.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 25.50, $ 24.50, $ 23.50
Amanqanaba enkxaso: $ 22.87, $ 21.66, $ 20.50
I-XAGUSD yexesha elide iTrend: Bearish
Ngokubanzi, umngcipheko we-XAGUSD usajongelwe phantsi kwizinto ezingalunganga, ngenqanaba lenkxaso le- $ 22.87 elisebenza njengenjongo elandelayo efanelekileyo. Kwiibhere, inqanaba leedola ezingama-21.89 lilo eliza kubetha. Iibhere zesilivere zinokuqiniswa kukuhla kweemeko ze-RSI, ezibonisa inqanaba le- $ 21.89 njengenqanaba lenkxaso ethe tyaba.
Ngelixa uzama ukubuyisa, isinyithi esimhlophe sithengisa ngoku sinobuthathaka obuncinci kwinqanaba le- $ 23.03. Ukuba amaxabiso eSilver athengisa ngaphezulu kwe- $ 23.50 yenqanaba lokudibana kwenqanaba, kwelinye icala, i-traction ye-bullish inokuqokelela ukulandelelana kwaye isebenze ii-odolo zokuthenga, mhlawumbi ibangele ukunyuka ngesiquphe kwesilivere ukuya kwinqanaba eliphezulu le- $ 25.00.
I-XAGUSD yeXesha elifutshane eliQhelekileyo: Ukuthwala
Uhlalutyo lobuchwephesha kwixesha elisezantsi libonisa ukuba i-XAGUSD iqhekeze kwisitishi se-bearish kwaye inokurhweba phakathi kwenqanaba lokumelana nelixa elizayo le- $ 24.00 kunye nexesha eliphantsi eliphantsi le- $ 22.87. Nakuphi na ukuphuma okuncinci kuya kugcina ukuthengiswa kwentsimbi emhlophe ukuya kwinqanaba elilandelayo lenkxaso ye- $ 21.89.
Ngaphezulu kwenqanaba lama- $ 23.50, ukubuyela kwinqanaba le- $ 24.50 kunokwenzeka. Isilivere inokuphinda inyuke isuka kugqithiso kwaye ibuyele umva nge- $ 25.00s, kodwa ilahleko ngokuthelekiswa nokuphakama kwamadola ayi-26.00 isekhona. Ukubheja okufutshane ngezantsi kweedola ezingama-22.87 kunokwenzeka kakhulu, kujoliswe kwi-21.89 yeedola nakwi-21.66 yeedola.
Ukuzama kweXAGUSD kwiiNdawo zokuBuyisa kwakhona phantsi kweedola ezingama-26.00
Ukuhlaziywa: 1 Agasti 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso eXAGUSD-Agasti 1
Isilivere yenze enye inzame yokunyuka phezulu kwaye iphinde yabuya nayo ilahleko yayo yangaphambili, kodwa isibini seXAGUSD sisenendlela ende ekufuneka sihambe phambi kokuba abathengi bakhuseleke. Njengabathengi bajonga umsantsa phakathi kweebhanki eziphakathi kunye nokuxubekileyo umqolo oluhlaza ngaphezulu koontanga bayo ngamaxesha okonyusa umngcipheko, iSilver ihlala iphantsi kwe- $ 26.00.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 27.50, $ 26.75, $ 26.00
Amanqanaba enkxaso: $ 25.00, $ 24.50, $ 24.00
Kwitshathi yemihla ngemihla, awona manqanaba aphambili okumelana nokubukela angama- $ 26.00 kunye ne- $ 26.75 yamanqanaba, athintele ukuqaleka kwayo ukusukela ekuqaleni kukaJulayi. Amanqanaba asezantsi akutshanje ajikeleze ukunyuka kwemihla ngemihla kwi- $ 24.50 kufuneka inike inkxaso kwangoko kwimeko yokwehla okungalindelekanga.
Ukuba isithintelo se- $ 26.00 kunye ne-26.75 yeedola isilele ukubamba, amaxabiso esilivere anokulungela ukuya phambili kwixesha eliphakathi ukuya kwelide. Intshukumo yentengiso ngokubanzi ibidibanisa ngaphantsi kwamanqanaba e-26.00 yeedola kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Ukunyuka okuzinzileyo ukuya phezulu ngoFebruwari 1 kunokuba nokwenzeka ukuba yaphuka ngaphezulu kwe- $ 27.50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isilivere ibonakala ithintelwe ngumqobo omkhulu wobugcisa kwi- $ 25.80. Ukuba isithintelo sibambe, iXAGUSD kulindeleke ukuba ifumane inkxaso kufutshane nenqanaba le- $ 25.30, icothise iibhere kunye nokwandisa inzuzo ngokuchasene neDola yaseMelika ngexesha elifutshane, enkosi kwi-4 yeyure ehambayo ye-13.
Okwangoku, iibhere akunakulindeleka ukuba ziphumelele kwintengiso. Uluhlu oluphezulu phakathi kwe- $ 26.00 kunye ne- $ 26.75 inokuba yinjongo ephezulu. Ikhefu eliqhubekayo apha ngezantsi, kwelinye icala, linokubonisa ukudinwa okuphezulu, ukubeka isibini emngciphekweni wokophula uphawu lwengqondo oluphambili lwe- $ 25.00.
tags Isilivere (XAGUSD)
Abathengisi beXAGUSD Bazama ukuBamba bajikeleze i-26.00 yeedola
Ukuhlaziywa: 18 Julayi 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso eXAGUSD-Julayi 18
Isilivere (XAGUSD) ayiphumelelanga ukophula isithintelo esiqinileyo ngaphambi kwendawo eyi-26.40 yeedola kwakhona. NgolwesiHlanu, yatswina kancinci ezantsi kwaye inokuhlala ixinezelekile, abathengisi ngoku bazama ukubamba indawo engange- $ 26.00. Inkqubo ye- Idola yaseMelika ifumana ukubambeka njengomceli mngeni kwi-XAGUSD.
Amanqanaba okuchasana: $ 27.50, $$ 26.75, $ 26.00
Amanqanaba enkxaso: $ 25.50, $ 25.00, $ 24.50
Ngaphandle kokubuyiswa kwakhona, i-XAGUSD igcine ukubambelela ngokuqinileyo ngaphezulu komgaqo wokunyuka njengoko amaxabiso edityaniswa phantsi kwendawo yokumelana ne-26.75 yeedola. Kwicala elingaphezulu, inani elijikeleze i $ 27.00 lisenokufikeleleka. Nangona kunjalo, kuphela ukuvalwa okuqinileyo ngaphezulu kwangoLwesihlanu okuphezulu kwe- $ 26.45 kungabhengeza ukonyuka okungaphezulu.
Esi sibini sinokuvula ngokungathandabuzeki kwentsimbi emhlophe. Silindele ukuba iSilver yehle kwi-25.50 yeebhendi yenkxaso ekuqaleni kweveki entsha ukuba iyasilela ekubuyiseni inombolo eyi- $ 26.00 ejikelezayo. Isalathi samandla esihambelanayo singaphantsi komgangatho ophakathi kwawo-50, ebonisa ukuba ixabiso linokuba buthathaka kwinqanaba lokuxhasa le- $ 25.00.
Uhlalutyo lobuchwephesha kwixesha elisezantsi libonisa ukuba i-XAGUSD iqhekeze kwisitishi se-bearish kwaye inokurhweba phakathi kwenqanaba lokumelana nelixa elizayo le- $ 26.00 kunye nexesha eliphantsi eliphantsi le- $ 25.50. Nakuphi na ukuphuma okuncinci kuya kugcina ukuthengiswa kwentsimbi emhlophe ukuya kwinqanaba elilandelayo lenkxaso ye- $ 25.00.
Ngaphezulu kwenqanaba lama- $ 25.50, ukubuyela kwinqanaba le- $ 26.00 kunokwenzeka. Isilivere inokuphinda inyuke isuka kugqithiso kwaye ibuyele umva nge- $ 27.00s, kodwa iinzuzo xa kuthelekiswa nokuphakama kwamva nje kwe- $ 26.77 zisenokwenzeka. Ukubheja okufutshane ngezantsi kwe- $ 25.50 kunokwenzeka kakhulu, kunye neethagethi kwi- $ 24.50 kunye ne- $ 23.50 eyandisiweyo.
I-XAGUSD: Ixabiso lesilivere libambe ngaphezulu kwe-Mid $ 26.00 yenqanaba
Ukuhlaziywa: 4 Julayi 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso eXAGUSD-Julayi 4
The Isilivere (XAG) Abathengisi abakwazanga ukugcina ixabiso labo lingaphantsi kwenqanaba lama- $ 25.00 kwaye baqala ukunyuka okuthelekiswa neDola yaseMelika. Isibini seXAGUSD siye safudukela kwindawo elungileyo emva kokungena kwinqanaba eliphakathi leedola ezingama-26.00. Isilivere ibambe ngelixa idola liwile ngolwesiHlanu njengoko umngcipheko wokutya wonyukile.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 28.00, $ 27.50, $ 27.00
Amanqanaba enkxaso: $ 26.00, $ 25.50, $ 25.00
Umndilili ohambahambayo wesilivere (i-XAGUSD), ngoku esebenza njengenkxaso kwi-5 yeedola, usebenze njengesiseko esiqinileyo somsebenzi wexabiso kwiintsuku zamva nje, ngomndilili oshukumayo we-26.00 malunga nokuwela ezantsi kwi-13 yeedola enikezwe ukutshintsha kwendlela.
Ukuya kwicala eliphezulu, kukho ukumelana okuhle kwisithili se- $ 26.72, ngelixa kwicala eliphantsi, uluhlu lwangoku ludlala ngokujikeleza inqanaba le- $ 25.50. Okwangoku, iXAGUSD iyenyuka, kwaye iinkunzi zeenkomo zinokuzama ukutyhala ixabiso elingaphezulu kwe- $ 26.72.
Ukuthengwa kobuchwephesha ekubuyiselweni kwexesha elifutshane lokujikeleza kwenkxaso yokunyuka kwinqanaba le-25.52 yeedola ukusuka nge-29 kaJuni kuye kwanceda amaxabiso esilivere abuye abuyele kwinqanaba le- $ 26.00 ngexeshana elifutshane. Isilivere, kwelinye icala, ihlala kakuhle ngaphakathi kuluhlu lwamva nje xa ijongwa ngaphezulu kwexesha eliphakathi.
Kule veki, iSilver (i-XAG) inokuzama ukuphuma ecaleni, kwaye ikhefu le- $ 26.72 elincinci elichasayo linokutyhala ixabiso liye kwi- $ 27.00. Akukabikho lungiselelo lokuthenga okwangoku. Kodwa, ngaphambi kwako nakuphi na ukunyuka, ukurhweba okuzinzileyo ngaphezulu kwenqanaba leedola lama-26.00 kufuneka kuqinisekisile ukuba isaphulelo esivela kwi- $ 25.52 sigqityiwe kwinqanaba lama- $ 26.50.
Izikhundla zeXAGUSD zoKwenza nzulu kokuDilika emva koKwaphula amaNqanaba aPhambili
Ukuhlaziywa: 20 Juni 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso eXAGUSD-nge-20 kaJuni
Isilivere (i-XAGUSD) yahlala iphantsi koxinzelelo oluphakathi ezantsi emva kokugqiba iveki ephelileyo kwingingqi engalunganga. Ukukhokelela ekubuyiseleni ngokuthe ngcembe kumaxabiso ase-US, iinkunzi zeenkomo zinyathela ngononophelo. Inkqubela phambili yesilivere inokuvela ukuba ngaba Ukubuyela umva kwedola yaseMelika.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 28.75, $ 27.50, $ 26.72
Amanqanaba enkxaso: $ 25.50, $ 24.50, $ 23.50,
Njengoko ixabiso liqhubeka nokuhlasela indawo yenkxaso yexesha elikufutshane ephantsi kwenqanaba le- $ 26.00, abathengisi beXAGUSD baphinde bafumana ulawulo lwexesha eliphakathi. Inkxaso yokunyuka kwenqanaba, enokuthi isebenze njenge-backstop, ilele phantsi kwenqanaba le- $ 26.00, iyenza isiseko esihle seebhere.
Ekukhuleni kwamandla e-USD, isinyithi esimhlophe siwile kwinkcaso yomyinge we-5 kunye ne-13 imiqobo, kwaye ikhefu elingaphantsi kwenqanaba lama- $ 26.00 liya kukhokelela kuvavanyo lwendawo yenkxaso ethe tyaba kwinqanaba le- $ 25.00. I-Index ye-Relative Strength Index (i-RSI) yemihla ngemihla isemazantsi, ebonisa ukuba ukulungiswa okungalunganga ngakumbi kunokwenzeka.
I-XAGUSD yagqityelwa ukubonwa isifa kwi- $ 25.78 kwisiphelo esisezantsi kwitshathi yayo yeeyure ezi-4. Okwangoku, ukubonakaliswa kobuchwephesha kwitshathi yeeyure ze-4 kuye kwahamba ezantsi, kubonisa ukuba obunye ubuthathaka kunokwenzeka. Nangona kunjalo, isaphulelo sexesha elifutshane se-RSI kufuneka sijongwe ngononophelo ngaphambi kokumisela ukuhla ngakumbi.
Ikhefu eliqinileyo elingaphantsi kwendlela yokunyuka ekwi- $ 25.73 inokukhokelela kumanqaku asezantsi kwi- $ 24.50. Injongo elandelayo ephezulu, kwelinye icala, ikwinqanaba leedola lama-26.72. Inkxaso ebalulekileyo yexesha elikufutshane ifumaneka kwi-25.50 yeedola, esebenza njengestopgap yokwehla kwesilivere eyongezelelweyo ukuya kuma- $ 24.01 ngonyaka.
Abathengi bePair yeXAGUSD bajonge ukuQhubeka kweBullish
Ukuhlaziywa: 6 Juni 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso eXAGUSD-nge-6 kaJuni
Emva kokusilela ukwenza inzuzo kwi buthathaka DXY ngolwesiHlanu, iXAGUSD ibone abanye bethenga kufutshane nephawu le- $ 27.00. Njengabathengi bezingela ukuqhubeka okungasentla, isibini siyalungisa kodwa sinokujongana nenqanaba elitsha. Njengokuthenga inzala kunyuswe kwinqanaba leedola ezingama-27.22, isilivere ngoku ityhalela phezulu ngokuchasene nomda ophezulu kwinqanaba le- $ 28.00.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 30.13, $ 28.75, $ 28.32
Ngenxa yokuthenga inzala kwinqanaba le-27.22 yeedola, umfutho ombi uye womelela kakhulu. Ukuba abathengi banokutyhala ixabiso elingaphezulu kwelifu kunye nendawo yokumelana eyenziwe phakathi kwe- $ 28.00 kunye ne- $ 28.32, ixabiso linokuvavanya ngokukhawuleza ukuphakama okukufutshane kwe- $ 28.90.
Kwicala elisezantsi, inkxaso yokuqala inokuvela kwi- $ 27.50- $ 27.00 kuluhlu, kwaye ukwaphulwa ngokuqinisekileyo kwale ndawo yenkxaso yexesha elide kungathumela ukuhla kwexabiso kwi- $ 26.72 kunye ne- $ 26.00 lows, ngokwahlukeneyo. Ukuba ixabiso lilandela iphethini, ukunyanzeliswa kwesinyithi kunokuba buthathaka, kwaye iibhere zinokuphinda zikhokele.
Isilivere ibonakala ngathi ihamba kumqobo wobuchwephesha kwinqanaba le- $ 28.00, njengoko kubonisiwe kwitshathi yeeyure ezi-4. Ukuba isithintelo sibambe, i-XAGUSD ilindelwe ukuba ifumane inkxaso kufutshane nenqanaba le- $ 27.50, enkosi kwi-4 yeyure ehambayo ye-5, kwaye ubuye ukongeza inzuzo ngokuchasene neDola yaseMelika kwixesha elifutshane.
Uluhlu oluphezulu phakathi kwe- $ 28.00 kunye ne- $ 28.90 inokuba yinto ekujolise kuyo ephezulu; Okwangoku, iibhere akunakulindeleka ukuba ziphumelele kwintengiso. Ikhefu eliqhubekayo apha ngezantsi, kwelinye icala, liya kuqwalaselwa njengeempawu zokuqala zokudinwa okuqinisekileyo, ukubeka isibini emngciphekweni wokuvavanya inqanaba elibalulekileyo le- $ 26.72.
Ukuphumla kweSilivere kuphelile!
Ukuhlaziywa: 21 May 2021
Isilivere yehlile kwixesha elifutshane, kodwa i-bias ihlala ikhula. Ixabiso lifumene inkxaso eyomeleleyo, ke inokuqala ukwanda kwakhona. Ukwehla kwethutyana kulindeleke emva kokufikelela kwinqanaba lokumelana ngamandla.
Kuyarhweba ngokuluhlaza kwinqanaba le-27.777 ngeli xesha lokubhala ukuzama ukufikelela kwinqanaba leengqondo le-28.000. Ukuhla kwexabiso le-USD kunceda ixabiso lesilivere ukuba lonyuse kwaye licime ilahleko. Ngokobuchwephesha, i-bias iyashukuma njengoko ixabiso lingaqinisekisanga ukuhla okuthe kratya.
Isilivere (XAGUSD) H4 Uhlalutyo!
Isilivere yehlile emva kokubhalisa kuphela ukuqhekeka okungeyonyani ngaphezulu komgca wesilumkiso (WL1). Ngoku ifumene inkxaso kumgca we-pitchfork wehla (ml). Ukusilela kwayo ukufikelela kunye nokuzama kwakhona indawo yepivot yeveki (27.345) kubonisa ukuba i-XAG / USD ingaqala ukukhula kwakhona.
Imbonakalo iyakhula okoko ihlala ngaphakathi komzimba wejelo. Ukubuyela ngaphezulu kwe-R1 (27.963) kungabonisa ukukhula ngakumbi kumgca ophezulu ophakathi (uml). Ukuphakama okuphezulu okuphezulu, ukuvala ngaphezulu kwe-28.003 kunokuzisa ukubonwa okuphezulu ngaphezulu kweWL1 ngokunjalo.
Ukwaphuka okungamanga ngokuzahlula okukhulu ngezantsi komgca we-median (ml) wehla yeefolokhwe kubonise amandla aphezulu. Ukuqhekeka okusebenzayo ngaphezulu kwe-28.000 kuqinisekisa ukukhula okuqinileyo.
tags isilivere, Uhlalutyo Technical, ukuseta urhwebo, XAGUSD
← Entsha izithuba 1 2 3 4 abaDala izithuba →